BEGONIA ELATIOOR: SAWIRRADA BORIYAS IYO NOOCYO QASACADAYSAN, QAABABKA DARYEESHA GURYAHA, HABABKA ILMA DHALISTA GURIGA IYO ILAALINTA UBAXA CUDURADA - GURI, GURI
Lush iyo hibo cajiib ah Elatior - dhammaan siraha geedka
Noocyada cusub ee begonias, curonia Elatio gaar ahaan waa muuqaal. Ubax Tani waxay u qoondeeysay jecel yaryar si muuqaal qurux badan, quruxda ubax ee wakhti kasta oo sanadka ah iyo kala duwan ee maareynta midabka.
Begonia Elatior sidoo kale waxay qaadataa xidid beerta waxayna ku haboontahay inay sii korodho guriga. Waa arrin aan la qabin, laakiin weli daryeelka iyo dhirta taranka ayaa leh astaamo gaar ah. Maqaalkani wuxuu si faahfaahsan u sharxi doonaa iyaga oo bixin doona si uu u barto sawirka ubaxa. Waxa kale oo aad daawan kartaa fiidiyaha waxtar leh mawduucan.
Tafaasiisha iyo asalka
Noocyadaas waxaa lagu xannibay iyada oo la mariyo Socotransky iyo begonias tuberous. Sababtan darted, wuxuu helay muuqaal xusuusta ah iyo noocyo kala duwan oo ah ubaxyo.
Magaca noocyada latin - Begonia elatior. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa begonia xilliga qaboobaha sababtoo ah waxay ubax karaa xilliga qaboobaha. Dibedda, baadiyaha, oo gaadhaya ilaa 40 sentimitir. Waxay leedahay inflorescences cuno badan oo ah midabyo kala duwan, fareeshka casiir leh, iyo caleemuhu waa dhalaalay, cagaaran, oo la jarjaray geeso jug leh, qaabeeya sida wadnaha. Laga soo bilaabo korka ay hooska ay u iftiimayaan, qeybta hoose waxay leedahay midab cagaaran oo cagaaran.
Inta lagu jiro xilliga ubax, baadiyaha waxaa lagu daboolay inflorescences on peduncles dhuuban, kaas oo u taagaya si wanaagsan oo ka dhan ah asalka ah caleemo madow. Ubaxa caadi ahaan wuxuu bilaabmaa xilliga dayrta wuxuuna soconayaa lix bilood. Ubax waa weyn, ilaa 2-3 cm dhexroor.
Noocyada dhirta iyo sawirrada kala duwan
Galka wuxuu u kala qaybsan yahay dhowr nooc oo ku xiran dhererka: gaaban (ilaa 25 cm), dhexdhexaad ah (ilaa 30 cm) iyo dheer (ilaa 40 cm). Ka fikir noocyada ugu caansan.
Isku xidhka Ingiriisiga. Waa hab dhexdhexaad ah, sababtoo ah waa wax isdhaafsan. Flowers Terry, midab casaan leh jilicsan oo cad oo jilicsan. Dareemayaasha aan qabyo ahayn ee daryeelka.
Kala duwanaanta dhirta ee baadiyaha dhexdhexaad ah. Ubaxyada badi waa terro, siyaalo kala duwan. Waa noocaan oo badanaa laga heli karo dukaamada beeraha. Begonia Mix waxay leedahay ubax badan iyo daryeel fudud..
Guddi: Begonia Elatior waa wax aad u wanaagsan hadiyadii halkii bouquet ah.
Sida loo doorto meel loo dego?
Ubaxa waxaa lagu beeray beerta dhexdeeda iyo gurigaba sida geedo gudaha ah.. Marar badan, waxay jecel tahay isha daaqadaha iyo balakoonnada guryaha ee magaalada. Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in lagu barto si faahfaahsan sida loo doorto goobta saxda ah ee quruxda.
Waxaa lagu talinayaa in la doorto meel si fiican u iftiimaya, laakiin maaha qorraxda tooska ah. Haddii iftiinku uu aad u iftiimiyo, ubaxyada waa la burburin doonaa, dabacsanaan ama gubasho daran oo caleemo ah ayaa la heli doonaa. Nalalka ugu fiican, iftiinka jilicsan. Waxaad ka heli kartaa, warqad cad oo caan ah. Baaxada iyo foorjada ubaxa waxay kuxirantahay iftiinka habboon. Ku haboon dariishadaha galbeedka iyo bariga. Nalalka dheeraadka ah ee jiilaalka looma baahna, sababtoo ah noocaani wuxuu loola jeedaa dhirta saacadaha gaaban.
Begonia Elatio wuxuu jecel yahay ciidda jilicsan, oo jilicsan. Marka transplanting waa in aad u taxaddar badan, sababtoo ah xididdada dhirta this yihiin dhuuban iyo jilicsan. Guud ahaan, way ka wanaagsantahay in la fuliyo isdhexgalka, iyada oo aan la kala saarin carrada hore, laakiin ku darida cusub cusub. Waxayna jeceshahay dheriyo waaweyn, sidaas darteed mid kasta oo cusub ayaa loo doortaa oo kaliya laba santimitir oo ka badan.
Waxay qaadan doontaa dheecaan sababtoo ah begonia uma dulqaadanayso biyaha joogtada ah ee xididdada. Bacriminta macdanta ayaa aad ugu fiican quudinta, laakiin waa in si taxaddar leh loo adeegsadaa si taxadar leh, si aanay u waxyeeleynin nidaamka xididka. Ha iibsan Bacriminta organic - waxay u xun yihiin labada gobol ee geedka iyo muuqaalkiisa.
Haddii ilmo-abuurka lagu beeray dhul furan, waxaa lagu talinayaa in la daryeelo diyaarinta ciidda.. Waa lagama maarmaan in la daboolo oo laga saaro dhoobo waaweyn.
Bush jecel yahay waraabinta dhexdhexaad ah, inta jeer ee ay ku xiran tahay muddada ubax - inta lagu jiro ay ka sii badan tahay, ka dibna jarjar saddex jeer. Waa in la waraabiyaa marka ciidda ay qallalan tahay. Xaalad waliba ma lagu buufin karaa! Ka dib dhan, tani waxay keenaysaa horumarinta cudurada fangas kala duwan, iyo sidoo kale waxay u dhaqmi kartaa sida galaas weyn ee qorraxda, taasoo keenta gubasho caleemo.
Wuxuu diyaariyaa heerkul aan ka yarayn 18-20 digrii. Dhimashada hoose. Frost ma aha mid si siman u taagan. Heerkulka qolka (25 darajo) ayaa la aqbali doonaa.
Waxaa muhiim ah in laga saaro ubaxyo yar yar wakhtiga. Sidaas awgeed suufku waa la keydiyaa oo meesha laga saaro burooyinkeeda cusub waa la sii daayaa.
Xaalad aad u dhib badan xaaladaha walaaca iyo xaaladaha sii xumaanaya.
Waqtiga aamusnaanta, marka ubaxu dhameeyo, daryeel gaar ah ayaa loo baahan yahay. Ka dib markii loogu yeero jiilaalka, jarida gooynta ilaa 7-8 sentimitir ayaa la qaadaa. Heerka-kor lagu sharraxay qaabka waraabinta iyo qaabka heerkulka ayaa lagu arkay. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la isticmaalo kiciyaasha kobcinta sida Appin, Zircon. Waxay ka hortagayaan dhibaatooyinka kala duwan ee dhirta.
Noocyada kale ee begonias waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah. Si aad ubaxdo oo aad ku faraxsantahay sanadka oo dhan, waa inaad raacdaa xeerar gaar ah. Waxan u sheegnay maqaalahan:
Macluumaad xiiso leh oo ku saabsan ubaxyada begonias.
Xeerarka aasaasiga ah ee daryeelka weligiis baraneysa ubaxa guriga.
Terry Gorgeous weligiis baran ubax.
Waxaan kugula talineynaa in aad daawato fiidiyowga ku saabsan daryeelka caafimaadka ee Elatio:
Ubaxa wuxuu ku jiraa dhibaatooyin iyo cudurrada qaarkood.
Ka tago caleemo. Waxay dhacdaa marka aysan jirin wax waraabin ah, oo qoyaanku waa yar yahay.
Muuqaalka koofiyadaha, kalluunka caleemaha. Waxay ka dhacdaa qoyaan badan iyo heerkul hooseeya.
Brown, geesaha la qalajiyey ee caleemaha, dhoobo gooyo. Waxaa keeney hawo qalalan, heerkul aad u sarreeya.
Root kallana. Dhibaatadani waxay dhacdaa sababo badan oo waraabka ah.
Kiriimka "Gray" - waqtigeeda kama saarin burooyin yar yar.
Pallor iyo daciifnimada caleemaha. Waxaa keeney iftiin yar.
Caarada budada, caarada caarada, aphids. Marka cudurka koowaad, oo muujiya qaabka lakab cad caleemaha, daaweynta walxaha fungicidal ama baaruud ayaa isla markiiba loo baahan yahay.
Digniin: Si looga hortago dhaawacyo kala duwan, oo lagu waraabiyo xalalka phytosporin ayaa loo isticmaalaa.
Begonia waxay u egtahay saddex siyood:
Gooyntu waa laga gooyaa dhirta la jajabiyey, ka dibna waxaa la dhigayaa bacriminta qoyan ama perlite. Mid kale oo ku habboon ee loo xoqo gabal gabalka sphagnum, marka lagu daro saameyn bactericidal ah. Waxa kale oo aad ku ridi kartaa galaas biyo ah iyo kiniin kaarbiyaysan. Sidaas goynta ayaa si dhakhso ah u xidhan. Xaaladdan, baxsiga waa inuu noqdaa ugu yaraan 7 sentimitir dheer. Tani waa kala duwanaanshaha taranka ugu caansan ee ubaxa.
Seeds waxaa lagu beeray karaa sanadka oo dhan. Waqtiga leh iftiin yar, waxay u baahan yihiin inay bixiyaan iftiin dheeraad ah ee biqil. Si kastaba ha ahaatee, tani waa rafcaan, habka loo isticmaalo si aan caadi ahayn.
Waxaad si fudud u kala qaybin kartaa baadiyaha hooyada, oo ku faafaya dherooyin kala duwan. Laakiin xaaladdan waa in aynaan illoobin niyadjabnimada xididada, sidaa daraadeed geeddi-socodkani waa inuu noqdo mid jilicsan. Sababtan awgeed, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa si xad dhaaf ah.
Waxaa ugu wanaagsan in la koro begonia ah gooyn. Waa mid deg deg ah oo kalsooni leh. Laakiin kiiskan, waxaa muhiim ah in aan la iloobin si joogta ah u jiido for the beertii baadiyaha. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan taranta curonia Elatioor abuurka iyo gooynta, halkan ku akhri, oo waxaad ka baran doontaa sifooyinka iyo waxyaabahan noocyada taranta ee qodobkan.
Begonia Elatio - waa geed quruxsan oo qurux badan. Waxay noqon doontaa qurxinta guriga iyo beerta. Iyo sida hadiyad waxay keenaysaa riyooyin aan la ilaawi karin. Sidaa darteed, dhexjeeda this waa mid aad u caan ah noocyo kale oo begonias.